'UMvikeli woMphakathi uhambisana noZuma koluthinta umbiko kaMadonsela' | News24
'UMvikeli woMphakathi uhambisana noZuma koluthinta umbiko kaMadonsela'
Johannesburg - UMvikeli woMphakathi uBusisiwe Mkhwebane kubukeka sengathi uhambisana noMengameli Jacob Zuma ekuphikiseni izincomo zikaThuli Madonsela zokuba inhloko yamajaji kube iyona eqoka ijaji elizohola uphenyo ngokulawulwa kwabandla okuMbuso ngabathile.
Engqoxweni abenayo neSunday Times kuleli sonto, uMkhwebane uthe ukholelwa ukuthi noma ngabe yiliphi ijaji, ngisho eliqokwe uZuma, lingakwazi ukuphenya ngobudlelwane bomndeni wakwaGupta neKhabhinethi likaZuma, ngoba amajaji asebenza ngokuzimele.
Ukuphawula kwakhe kuze ngemuva kokuba etshele izintatheli ukuthi nakuba efake isaziso sokuphikisa isicelo sikaZuma sokubuyekezwa koMbiko kaMadonsela, usafuna ukwalulekwa kwezomthetho mayelana nokuthi aqhubeke yini nalesi sinyathelo.
OLUNYE UDABA: Ucasule umshayeli wetekisi owaxoshwa uKhozi FM
Lokhu kwenza kubukeka sengathi uMkhwebane angase asihoxise isaziso sokuphikisa isicelo sikaZuma.
Utshele iphephandaba ukuthi basabheka ukuthi ngabe kufanele yini ukuba kube nomuntu owenza imisebenzi kamengameli.
"Amajaji asebenza ngokuzimela. Ngakho noma ngabe yiliphi ijaji lingakwazi ukwenza umsebenzi ngaphandle kokwesaba noma ukuchema.”
UMkhwebane usecele inkampani yabameli i-Adams & Adams ukuba imluleke mayelana nokuthi izincomo ziyahambisana yini nomthethosisekelo ngoba yena ukholelwa ukuthi umengameli nguyena onamandla okuqoka ijaji.
One winner bags Daily Lotto prize of R400 000! 50 minutes ago Click here for the full list of lottery results